Eto ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro, ireo telefaona Apple vaovao | Vaovao momba ny gadget
Hoy Apple nankalaza ny fomban-drazana Keynote Septambra izay manavao ny elanelam-potoana iPhone, ary ity fanontana ity dia tsy ho antenaina kely noho ny teo aloha. Amin'ity tranga ity dia nanapa-kevitra i Apple fa hanavao tanteraka ny isan'ireo telefaona premium, hanova ny anarany amin'ny fikasana hiditra ao amin'ny katalaogera. Toy izao no nanoloran'i Apple ny iPhone 11 sy ny iPhone 11 Pro vaovao, andao hojerentsika hoe inona avy ireo fiasa, ny vidiny ary ny daty famoahana azy ireo. Mijanona miaraka aminay hahitanao ny vaovao rehetra natolotr'i Apple tao amin'ny toerana mampiavaka an'i San Francisco.
Ny zavatra voalohany tadiaviko dia ny mampatsiahy anao fa afaka mamaky ilay fantsona ianao YouTube an'ny mpiara-miasa amin'ny Actualidad iPhone izay tsy hahafahanao mahita ny horonantsary nataon'izy ireo mivantana raha nanaraka ny fampisehoana ny iPhone 11 vaovao izy ireo, fa anio alina ihany koa hiaraka amin'izy ireo isika miaraka amin'izy ireo amin'ny podcast voalohany amin'ny vanim-potoana iPhone Actality haneho hevitra momba ny vaovao rehetra natomboka androany ary koa mitsangatsangana kely amin'ireo vokatra tsara indrindra izay hita tamin'ity IFA an'ny 2019, Aza adino izany.
1 iPhone 11, ny fanoloana ny iPhone XR
2 iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max, ireo zoky lahy
iPhone 11, ny fanoloana ny iPhone XR
Ny zavatra hitantsika voalohany dia ny iPhone 11, ny fanoloana voajanahary an'ny iPhone XR izay nanapahan'i Apple hevitra ny hanova ny anarana fa tsy ny toetra rehetra. Mahita fefy aliminioma isika tahaka ny nitranga tamin'ny maodely teo aloha, ary koa ny faritra anoloana izay misy ny FaceID ary ny zana-kazo kely kokoa noho ny tamin'ny fanontana teo aloha. Mikasika ny efijery, mitovy tanteraka amin'ny iPhone XR, manana tontonana isika LCD 6,1-inch miaraka amina vahaolana 1.792 x 828 pixel izay manome antsika famirapiratana manodidina ny 625 bitika sy hakitroky 326 teboka isaky ny santimetatra.
Size: 6,1 santimetatra
Fanapahan-kevitra 1792 x 828
Fanamafisam-peo stereo Dual
Amin'ity tranga ity, toy ny teo aloha, nanapa-kevitra i Apple fa hanana fitaovana mitovy ny fitaovana telo Apple A13 Bionic, miaraka aminy Coprocessor R1 miaraka amina modely Bluetooth 5.1 sy WiFi 6 MIMO ary koa GLONASS sy Galileo. Amin'ny fitsipika sy ny fiarahan'ny RAM 4 GB, tsy ho kely hery ny fitaovana, ary handinika bebe kokoa ny famahana ny fakan-tsary. Toy ny amin'ny iPhone XR, Apple dia nanapa-kevitra ny handefa an'ity iPhone 11 ity amin'ny loko samihafa: Maitso, mavo, volomboasary, mena, volomparasy sy lanitra manga.
Rafitra biometrika FaceID
Loko: Mainty, mena, maintso, mavo, fotsy ary lavender.
Nihaona taminay fanoherana ny rano ary manaparitaka IP67 izay mandova ihany koa amin'ny maodely teo aloha, seranan-tsambo iray mandeha amin'ny Jiro ho an'ny famandrihana sy famindrana angona. Na izany aza, ny fisongadinana dia nalaina tamin'ny alàlan'ny modely fakantsary fakan-tsary, ananantsika izao maodely roa sosona izay misy fakan-tsary 12 MP sy Ultra Wide Angle mitovy endrika aminy, Azonao atao izao ny maka sary maody môtô fa tsy mila miankina amin'ny rindrambaiko. Na eo aza ny sensor roa fotsiny, Apple dia nanapa-kevitra ny hampiditra modely toradroa lehibe ao aoriana izay mitovy amin'ny maodely "Pro" an'ny iPhone 11. Ao amin'ny fakan-tsary any aoriana ho fanampin'ny "mode night" vaovao hitantsika:
Fakan-tsary lehibe: 12 MP dual sensor miaraka amin'ny Wide Angle ary Ultra Wide Angle samy f / 1.8
Fakan-tsary selfie: sensor 12 MP TrueDepth miaraka amina aperture f / 2.2 ary Slow Motion
Mikasika ny bateria hanana 3.110 mAh isika izany dia hanome toky antsika indray fa io no iPhone manana fahaleovan-tena lehibe indrindra eny an-tsena, toy ny karazany telo mitahiry: 64 GB, 256 GB ary 512 GB miankina amin'ny filantsika. Averina indray fa Apple dia mbola mitohy na dia iray amin'ireo zava-baovao aza ny fananana ny foiben'ny marika.
Price: Avy amin'ny 809 euro
Famandrihana: zoma 13 tamin'ny septambra
Famotsorana: Azo alaina amin'ny 20 septambra
iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max, ireo zoky lahy
Ary fotoana izao hiresahana ireo zoky lahy, ireo mpandimby voajanahary an'ny iPhone XS sy iPhone XS Max. Tamin'ity indray mitoraka ity Apple dia nisafidy indray ny tontonana OLED sy ny vy nohosorana ho endri-javatra mampiavaka azy, saingy ho hitantsika fa tsy izy irery. Manana vera sy fananganana vy nohosorana isika, ny eo aloha kosa misy zana-kazo ambany kokoa noho ireo an'ny iPhone 11 amin'ny kinova mahazatra ary ananantsika karazany roa: 5,8 santimetatra ary 6,5 santimetatra. Samy hisafidy efijery OLED izy roa amin'ny fanapahan-kevitra avo kokoa noho ny Full HD misy takelaka avo lenta.
Size: 5,8 santimetatra
2436 x 1125 teboka (458 PPI)
Size: 6,5 santimetatra
Manana an'ity singa ity «Pro» ilay mpikirakira A13 Bionic iray miaraka amin'ny coprocessor R1 ary tsy latsaky ny 6 GB RAM, avo roa heny ny maodely mahazatra. Mandritra ny fitehirizana dia samy mizara karazany roa ihany koa: 64 GB, 256 GB ary 512 GB. Izahay koa manana modely Bluetooth 5.1 sy WiFi 6 MIMO ary koa GLONASS sy Galileo. Ity Pro variant an'ny fitaovana ity dia tsy hanana na inona na inona.
fitehirizana: 128 GB, GB 256, 512 GB
Loko: Mainty, volamena, maintso sy fotsy
Ny zava-baovao dia hita ao amin'ny maodelin'ny fakantsary telo, izay manana solomaso MP 12 telo, iray mahazatra, solomaso telefaona x2 zoom ary mazava ho azy zoro vaovao malalaka izay hiaraka amin'ireo fiasa vaovao an'ny rindrambaiko maka sary an'ny orinasa, tsy manadino ny fakan-tsary eo aloha koa MP 12. Amin'ny ambaratonga mizaka tena dia hanana 3.190 mAh ho an'ny kinova Pro ary 3.500 mAh ho an'ny kinova Pro Max. Hanohy hampiasa ny seranan-tsambon'i Apple Lightning izy ireo, ka ny fahafaha-mifindra any amin'ny port USB-C dia tavela ao toy ny nitranga tao amin'ny Pro range of iPads.
Fakan-tsary aoriana: 12MP Triple Sensor 12MP (f / 1.8) miaraka amin'ny solomaso telephoto (f / 2.0) sy zoro somary malalaka (f / 2.4)
Fakan-tsary selfie: 12 MP
ID ID amin'ny taranaka faharoa
Ny iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max dia haka fotoana kely hahatrarana ny tsena, 1.159 euro ho an'ny kinova kely ary 1.259 euro ho an'ny kinova lehibe kokoa, misokatra manomboka ny zoma 13 septambra ary amin'ny fanombohana ofisialy ny 20 septambra. Marihina fa ny asan'ny 3D Touch dia nilaozan'ny Apple ary nosoloin'ny Haptic Touch, ity dia fihemorana iray nalain'ny orinasa tamin'ny fikasana hahafahana manome tolotra finday azo averina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Apple mandefa iPhone 11 sy iPhone 11 Pro: Vidiny, daty ary fiasa
Apple Arcade dia efa manana daty fanombohana sy vidiny any Espana